शिब परियार को कन्सर्ट पहिलो पटक अमेरिका मा ! - Enepalese.com
शिब परियार को कन्सर्ट पहिलो पटक अमेरिका मा !
इनेप्लिज २०७४ साउन १७ गते २:२० मा प्रकाशित
शिब परियार संगीत पारखी हरु को लागि नौलो नाम होइन आधुनिक पुस्ता देखि सुगम संगीत लाई मन पराउने कुनै पनि वर्ग को लागि शिब सबैलाई मन पर्ने गाएक हुन् ! गित संगीत को विधा लाई गहिरो अधॆन गरि सकेका शिब पछिल्लो समयमा निक्कै चर्चित नाम हो उनले गएका दर्जनौ गित हरु निक्कै हिट भएका छन् ! उनै हिट गाएक शिब को कन्सर्ट पहिलो पटक अमेरिका मा हुन लागेको हो ! सान फ्रान्सिस्को सहर क्यालिफोर्निया मा पहिलो पटक स्टेज तताउन मेसो भने स्थानिय आयोजक नेपाल प्रडक्सन हाउस ले गरेको छ ! उक्त कार्येक्रम Saturday, August 12 at6पम Michaan Theater 2700 Saratoga St, Alameda, California 94501 मा हुन लागिरहेको कुरा कर्येक्रमका संयोजक कौशल राना र ध्रुब कुँवर ले जानकारी गराउनु भयो शिब लाई साथ दिन नाईका रेजिना उप्रेती , चर्चित मोडेल पार्वती राई र चर्चित मोडेल शंकर बि सी पनि अमेरिका आउने भएका छन् आफैमा चर्चा मा रहेका कलाकार हरुलाई पहिलो पटक अमेरिका मा पस्कन पाउदा निक्कै खुसि लागेको कुरा आयोजक कौशल राना ले जानकारी गराउनु गर्नु भयो !
उल्लेख्य मात्रामा दर्सक हरुको उपस्थिति हुने आनुमन गरिएको सो कार्येक्रममा इस्थानिये कलाकार हरुको प्रस्तुति हुने भएको छ ! नेपाली रेस्टुरेन्ट को मिठो परिकार को साथ मा अन्त्य मा डिजे एस बाबु लेपनि सबैलाई नचाउने छन् ! नेपाली कार्येक्रम हरुको महत्तो लाई बुझेर बे एरिया का संघ सस्था बेक्ती बिसेस सबैलाई कार्येक्रम मा आफुले सक्ने ठाउँ बाट सहयोग गरिदिनु हुन आयोजक हरुले आनुरोध पनि गर्नु भएको छ !